Alex Sandro oo niyad jab ku riday kooxaha Manchester United iyo Paris St Germain – Gool FM
Alex Sandro oo niyad jab ku riday kooxaha Manchester United iyo Paris St Germain
Dajiye July 29, 2018
(Juventus) 29 Luulyo 2018. Daafaca garabka bidix ee reer Brazil Alex Sandro ayaa kusii dhawaanaya inuu sii joogo Bianconeri xiliyada soo aadan kadib markii uu ku fashilmay inuu u dhaqaaqo Manchester United.
Saxaafada Talyaaniga ayaa maanta oo Axad ah sheegtay inaysan haatan jirin fursad uu Alex Sandro ku bixi karo suuqan xagaaga.
Macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayay wararka xaqiijinayaan inuu doonayo in uu u adeegsado laacibka reer Brazil difaaca garabka bidix xili ciyaareedka soo aadan.
Wargeyska “Toto Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa isna shaaca ka qaaday in maamulka kooxda Juventus ay go’aansadeen in Alex Sandro ay ka saxiixdaan heshiis cusub uu kusii joogayo magaalada Torino.
Alex Sandro ayaa lala xiriirinayay tan iyo xili ciyaareedkii lasoo dhaafay inuu u dhaqaaqayo horyaalka Premier League, maadaama lala xiriirinayay dhamaan kooxaha Manchester City, Manchester United iyo Chelsea.
PSG oo diiday inay la wareegto mid kamid ah xiddigaha Manchester United
David Ospina oo ku dhaw inuu ka tago Arsenal